Sina Runjin © Krunt ™ -N1000 Fanamboarana milina fanala sy gilasy | Runchen
Runjin © Krunt ™ -N1000 Ice Cream Freeze Machine
Ny hatsiaka, ny fampifangaroana ary ny fikapohana gilasy ary ny rivotra mankany amin'ny gilasy. Fangatahana tampoka amin'ny vokatra hafa.
Ny fifangaroan'ny gilasy dia refesina amina varingarina mangatsiaka amin'ny paompy fitaovana. Ny fikorianan'ny rivotra tsy tapaka dia ampidirina ao anaty varingarina miaraka amin'ilay fangaro. Mandritra ny fandalovana amin'ny varingarina, ny rivotra dia kapokapoka amin'ny fangaro amin'ny dasher. Amoniaka misy ranoka miakatra ao anaty palitao mangatsiaka manodidina ny varingarina no manome ny hatsiaka. Ny kofehy vy dia mamoaka ny gilasy mangatsiaka avy amin'ny rindrin'ny varingarina, ary paompy fanindroany kosa mandroso ny gilasy avy any amin'ny faran'ny varingarina mangatsiaka mankany amin'ny milina famenoana.
Ireo frizidera frunt ™ -N1 mitohy dia mahafeno ny mari-pahaizana momba ny fidiovana 3-A an'ny Fikambanan'ireo mpamatsy sakafo any Etazonia, Etazonia. Ny kabinetra sy ny vata fampangatsiahana vata dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Ny faritra rehetra mifandray amin'ny afangaro sy gilasy dia vita amin'ny vy vy.
Fametrahana. Ireo vata fampangatsiahana mivantana dia ireo singa manana tena vonona hampifandray amin'ny herinaratra, ny vata fampangatsiahana, ny rivotra voafintina ary ny famatsiana mifangaro.
Ny varingarina mangatsiaka vita amin'ny nickel madio ary ny atiny anatiny dia chromium mafy nopetahany takelaka ary vita ny fitaratra. Ny dasher, miaraka amina kofehy scraper sy mpikapoka, vita amin'ny vy tsy misy fangarony.
Rafitra fampangatsiahana manome fahaizana mangatsiaka tsy tapaka mba hiantohana ny mari-pana amin'ny gilasy sy ny viscosity. Mandritra ny vanim-potoana fijanonana ary isaky ny mihidy ny vata fampangatsiahana, izany hoe mifandraika amin'ny fijanonana eo no ho eo dia asiana entona mafana hisorohana ny hatsiaka. Ny famatsiana amoniaka ranoka dia tsy maintsy tsy misy etona ary manana tsindry feno farafahakeliny 4 bar (58psi) ary ny mari-pana hisoka dia tokony -34 ℃ (-29 ℉).
Fiara. Ny hery dia afindra avy amin'ny motera lehibe mankany amin'ny dasher amin'ny V-belts.
Afangaroy sy paompy gilasy paompy fitaovana, azo ovaina ho an'ny famaranana miafina mba hanonerana ny akanjo mahazatra. Ny atin'ny trano vy tsy misy fangarony dia nopetahany chromium hampihenana ny akanjo toy izany.
Fiatoana eo noho eo mamela fijanonana vonjimaika amin'ny famokarana misy fatiantoka fangaro kely sy fanovana ny kalitaon'ny gilasy.
CIP (Clean-in-place). Ny faritra rehetra mifandray amin'ny mix sy ny gilasy dia diovina nefa tsy foanana. Rehefa mampihetsika ny programa CIP dia mamorona tontonana fanaraha-maso, ny kodiarana paompy fivoahana sy ny kodiarana paompy miditra dia mivoaka ary mamela fikorianan-tsiranoka mavesatra. Ny paompy sy ny dasher dia mandeha ho azy amin'ny fotoana sasany mandritra ny dingan'ny fanadiovana.
Rivotra voafintina avy amin'ny famatsiana mains efa ilaina dia ilaina amin'ny fifehezana ireo paompy mihoatra ny refy sy CIP.
Takelaka fikirakirana. Ny fiasan'ny masinina rehetra dia miasa avy amin'ny tontonana eo aloha izay misy metatra ho an'ny enta-mavesatra, ny fatran'ny tsindry, manomboka sy mijanona ny bokotra fanosehana ho an'ny paompy sy ny motera lehibe ary koa ny fikirakirana ny fifehezana amoniaka. Hafainganana paompy dia azo ovaina amin'ny 10 ~ 100%.
Afangaroy ny paompy dia avy amin'ny 80 ~ 550Litre / ora (21 ~ 145 US Gal).
Fitaovana mahazatra asio andiana fitaovana, andiana fitsitsiana mahazatra, sprockets hanovana ny tsindry varingarina ary pulley iray min. hafainganam-pandeha.
Vatan'ny milina mangatsiaka
Ny vatan'ny milina fanala dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Ny sisin'ny vy tsy misy fangarony amin'ny milina fanala dia azo esorina, hanamorana ny mpiasa fanamboarana amin'ny fanamboarana ireo faritra hafa amin'ny fitaovana.
Ny atin'ny faritry ny hatsiaka dia ny plastika chromium mafy ary miaraka amin'ny fikosoham-bolo, mba hahatratrarana dia misy fisosana milamina, noho izany ny fitaovana mifangaro gilasy dia afaka mahazo fifanakalozana hafanana tena mahomby sy fiatraikany mangatsiaka mahomby. Izy io dia fitaovana manetsika fikosoham-bolo miaraka amin'ny lelany vy tsy misy fangarony izay mihodina tsy tapaka amin'ny hafainganam-pandeha manaraka ny atin'ny faritry ny hatsiaka, mba hahazoana antoka fa misy famokarana malefaka ireo vokatra gilasy feno menaka, izay amporisihana hanaitra ireo singa wiper avy amin'ny motera lehibe amin'ny alàlan'ny fehikibo
Ny rafitry ny fampangatsiahana dia voaforona karazana compressor karazana famehezana ary mampiasa Freon ho toy ny vata fampangatsiahana
Paompy mifangaro amin'ny rivotra
Eo amin'ny tontonana voalohany an'ny milina fanala, misy valizy fanitsiana fidirana amin'ny rivotra, hantsaka ny slurry sy ny rivotra ao anaty amponga mahery.
Valizy mifehy ny tsindry
Ao amin'ny fantsom-boasary gilasy an'ny amponga mangatsiaka, misy valizy fanitsiana tsindry, hitazomana hatrany ny tsindry amin'ny amponga mahery.
Fampiasana ilay milina fanala
Ny bokotra rehetra miasa dia hita eo amin'ny tontonana aloha, tsotra sy mora ampiasaina.
Anisan'izany ireto switch switch manaraka ireto:
l Paompy fampifangaroana / fanidiana akaiky
l Fanombohana / hikorontana akaiky
l Rafitra fananganana vata fampangatsiahana / fanidiana
l Rafitra gasikara fanombohana / fanidiana
l Fanaraha-maso ny famokarana gilasy
l Fampisehoana viscosity amin'ny gilasy
Fanombohana ny milina fanala
Tena mety izy io ary azo ampiasaina mivantana aorian'ny famadihana ny rano, ny herinaratra ary ny entona.
Ny fanadiovana ny milina fanala dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny rafitra CIP afovoany. Ary ny fifandraisan'ny fantsom-panafody dia mandray ny tadiny
1000Litre / hr (270 US Gal) miorina amin'ny fepetra ambany:
Sifotra afangaro ao anatiny + 5 ℃ (+ 41 ℉) mari-pana amin'ny gilasy fivoahana -5 ℃ (＋ 23 temperature) mari-pana hisotro -34 ℃ (-29 ℉)
Ny atin'ny solika ao amin'ny amoniaka <30PPM
Overrun 100 ％
Karazana fifangaroana: fifangaroan'ny gilasy mahazatra misy 38% tototry. Rehefa voaray ny fomba fahandro mifangaro tena izy dia azo faritana ny fahaizany sy ny hafanan'ny fivoahana.
Fitaovana tsy voatery atao Frunt ™ -N1
Valizy telo-lalana miaraka amina fittings amin'ny fantsom-boankazo gilasy.
Fandrefesana tsindry gilasy miaraka amina fittings amin'ny fantsom-boankazo gilasy.
Fandrefesana mari-pana amin'ny gilasy miaraka amina fittings amin'ny fantsom-boankazo gilasy.
Paompy famahanana voankazo mba hanomezana sakafo ny fanalefahana ranon-javatra sy ny fandokoana amin'ny ampahany sasany amin'ny varingarina mangatsiaka.
Atsaharo ny valves ho an'ny vata fampangatsiahana.
Valizy fiarovana Nankatoavina TüV - takiana valizy fiarovana ho an'ny rafitra fampangatsiahana - tena famolavolana araky ny lalàna eo an-toerana.
Controller haingam-pandeha ho an'ny fanitsiana hafainganam-pandeha dasher.
Volavola Freon. Natao manokana ho an'ny Freon 22. mampihena kely ny fahafaha-manao.
Metatra mikoriana ny rivotra mifehy ny be loatra.
Fanamainana ny rivotra sy ny sivana hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra voafehy.
Piesy detase ho an'ny 3000hrs na fikojakojana 6000hrs.
Fifandraisana herinaratra 3 ~ 380 V ， 50 HZ
Fanjifana herinaratra 17 kW
Moto lehibe 15 kW
Motera paompy 0,75 kW
Max. fampangatsiahana entana 30 kW26000 kcal / h (34 ° C / 29 ° F mari-pana hisotro)
Votoatiny amonia 12 kg (NH3)
Rivotra voafintina 2 n m³ / h (tsindry bar. 6 bar)
Fahaiza-paompy 200/1000 Litera / ora52-260 US Gal / hr (fivontosana 100%)
Dimension pipa (tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna eo an-toerana)
Tsipika suction Ø48 mm
Tsipika ranoka Ø 18 mm
Tsipika fandefasana entona mafana Ø 18 mm
Tsipika famoahana Ø 18 mm
Andalana fiarovana Ø 18 mm
Tsipika fidirana amin'ny rivotra voafintina 6 mm
Afangaroy ny fantsom-pifandraisana Ø 25,4 mm
Fantsom-pamokarana gilasy Ø 38,1 mm
Bara 11 litatra
= 1.02 kp / cm² = 100 kPa = 14,5 psi= 0.2642 galona US
Previous: Runjin © Krunt ™ -N600 Milina fanala gilasy
Manaraka: Runjin © Krunt ™ -N1200 Ice Cream Freezing Machine
Runjin © Krunt ™ -N2000 Ice Cream Fangatahana Ice Cream
Runjin © Krunt ™ -N600 Milina fanala gilasy
Runjin © Krunt ™ -N300 Milina fanala gilasy
Runjin © Krunt ™ -N50 Milina fanala gilasy